Isithuthuthu sikagesi siqala indlela: Phusha ukuze uhambe
Usuku lokukhishwa: 2021-10-14
Uma uthola isikuta esisha sikagesi seMankeel, noma ngabe siyiphi imodeli, indlela yokuqala ukusunduza ukuqala ngokuzenzakalela. Okusho ukuthi, udinga ukuma enyaweni ngonyawo olulodwa ngemuva kokuvula, kanti olunye unyawo ludinga ukunyathela phansi bese uhlikihla emuva ukusunduza isithuthuthu siye phambili. Ngemuva kokuthi i-E-scooter iqhubekele phambili futhi izinyawo zombili zime esisekelweni, cindezela i-accelerator ngalesi sikhathi. ukusheshisa ngokujwayelekile. Siphinde sibe nePush ethile yokuqalisa imiyalo yokubonisa kumanuwali yomsebenzisi, elandelayo: Lo mklamo wenzelwe izizathu zokuphepha, ukugwema ukuthi umgibeli angathinta ngephutha i-accelerator bese i-E-scooter iphuma ngaphandle ilungisiwe, okwenza umgibeli alimale noma i-E-scooter iqhume phansi. Umkhiqizo wethu we-APP uphinde usekele ukuguqula imodi yokuqala yesikuta sikagesi ku-APP. Imodi yokuqala yesikuta sikagesi inga ...
Izilingo zesikuta sikagesi: ukuholwa kwabasebenzisi base-UK
Usuku lokukhishwa: 2021-09-02
Muva nje, abanye abathengi bethu abavela e-UK babuzile ukuthi izikezi zikagesi zingagibela ngokusemthethweni emgwaqweni wase-UK. Izikuta zombane, njengethuluzi elihlukahlukene lokugibela amandla eliye lavela eminyakeni yamuva, zingasetshenziswa njengethuluzi lokuhamba lokuzijabulisa. Kodwa-ke, ngenxa yezinguquko ezidingweni zokuhamba kwabantu, kwesinye isikhathi abantu bazosebenzisa izithuthuthu zikagesi njengokuhamba noma ezinye izimo. Ithuluzi lokuhamba. Amazwe nezifunda ezahlukahlukene zinemithethonqubo eyehlukile yokugibela izikuta kagesi emgwaqweni. Besihlale sikhuthaza ukuthi noma ngabe usebenzisa kuphi futhi ugibela izithuthuthu zikagesi, kufanele uthobele imithetho yomgwaqo wasendaweni futhi ugibele ngokuphepha. Njengomthengi osebenzisa futhi agibele ama-scooter kagesi e-UK, ungabheka izinqubomgomo ezifanele zasendaweni yakho zokugibela ama-scooter kagesi emgwaqweni kuwebhusayithi yoMnyango Wezokuthutha kahulumeni wase-UK ngale ndlela elandelayo: https: // www. gov.uk/guidance/e-scooter-trials- guidance-for-users ...
Amathiphu okuphepha kwebhethri
Usuku lokukhishwa: 2021-07-21
Ngokuvamile, ibhethri eligcwaliswe ngokugcwele lizosebenzisa amandla alo agcinwe ngemuva kwezinsuku ezingaba ngu-120-180 zokubekwe eceleni. Kumodi yokulinda, amabhethri anamandla aphansi kufanele akhokhiswe njalo ezinsukwini ezingama-30-60 Sicela ushaje ibhethri ngemuva kokushayela ngakunye. Ukukhathala okuphelele kwebhethri kuzodala ukulimala okungapheli kwebhethri ngangokunokwenzeka. Kukhona i-chip smart ngaphakathi kwebhethri yokuqopha ukushaja nokukhishwa kwebhethri, ngoba Umonakalo obangelwe ukushaja ngokweqile noma ukukhokhisa okungaphansi akamboziwe iwaranti. ▲ Isexwayiso Sicela ungazami ukuqaqa ibhethri, ngaphandle kwalokho kunengozi yokusha, futhi abasebenzisi abavunyelwe ukulungisa zonke izingxenye zalo mkhiqizo bebodwa. Isexwayiso Ungasishayeli lesi sikuta lapho izinga lokushisa elikhona lidlula izinga lokusebenza lomkhiqizo, ngoba amazinga okushisa aphansi naphakeme azobangela ukuthi amandla amakhulu we-torque anciphe. Ukwenza kanjalo kungahle kushelele noma kwehle, kuholele ekulimaleni komuntu siqu kube ukulimala kwempahla. ...
Lapho ugcina ibhethri noma ukushaja, ungadluli umkhawulo wokushisa ocacisiwe (sicela ubheke etafuleni le-parameter yemodeli). Ungabhobozi ibhethri. Sicela ubheke emithethweni nasezimisweni zokusebenzisa kabusha ibhethri nokulahlwa endaweni yakho. Ibhethri eligcinwe kahle lingagcina isimo sisebenza kahle nangemva kokushayela amamayela amaningi. Sicela ushaje ibhethri ngemuva kokushayela ngakunye. Gwema ukukhipha ngokuphelele ibhethri. Imvamisa Uma isetshenziswa ezingeni lokushisa elingu-22 ° C, ukubekezela nokusebenza kwebhethri kuhamba phambili. Kodwa-ke, lapho izinga lokushisa liphansi kuno-0 ° C, impilo yebhethri nokusebenza kungancipha. Ngokuvamile, ukukhuthazela nokusebenza kwebhethri elifanayo ku -20 ° C kuyingxenye yalokhu ku-22 ° C. Ngemuva kokukhuphuka kwezinga lokushisa, impilo yebhethri izobuyiselwa.
Ukugcinwa nokulungiswa kwansuku zonke
Usuku lokukhishwa: 2021-06-24
Ukuhlanza nokugcina Sula ifreyimu enkulu uyihlanze ngendwangu emanzi ethambile. Uma kunamabala okunzima ukuwahlanza, gcoba umuthi wokuxubha bese uhlikihla kaningi ngebhulashi lamazinyo, bese ulihlanza ngendwangu emanzi ethambile. Uma izingxenye zepulasitiki zomzimba ziklwebhiwe, zingapholishwa nge-sandpaper enhle. Isikhumbuzi Musa ukusebenzisa utshwala, uphethiloli, uphalafini noma amanye amakhemikhali awuketshezi ashubisayo naguquguqukayo ukuhlanza isikuta sakho sikagesi. Lezi zinto zingalimaza ukubukeka nokwakheka kwangaphakathi komzimba we-scooter. Akuvunyelwe ukusebenzisa isibhamu samandla okuphoqa noma ipayipi lamanzi ukufafaza nokugeza. ▲ Isexwayiso Ngaphambi kokuhlanza, sicela uqinisekise ukuthi isithuthuthu sicishiwe, futhi ikhebuli yokushaja ikhishiwe futhi ikhava yenjoloba yetheku lokushaja iqinisiwe, ngaphandle kwalokho izinto zikagesi zingalimala. Uma singasetshenziswa, sicela ugcine isithuthuthu endaweni epholile, eyomile. Sicela ungagcini isikuta ngaphandle isikhathi eside. S ...
Amaphuzu Okuhamba Ngezokuphepha
1: Sicela ungashayeli emanzini amile ujule ngaphezu kwe-2CM 2: Akuvunyelwe kubantu abaningi ukugibela isithuthuthu sikagesi ngasikhathi sinye noma ukugibela kuthwala izingane 3: Ungacindezeli isisheshisi se-accelerator lapho ubamba isithuthuthu sikagesi sihamba 4 : Sicela ugweme izithiyo lapho ugibela u-5: Sicela unake izithiyo zokugwema uhlevane 6: Sicela unake ukulawula isivinini sesikuta sikagesi lapho wehla umqansa, futhi uma ushayela ngejubane elikhulu, sicela unake ukusetshenziswa kwamabhuleki amabili ndawonye 7 : Akuvunyelwe ukugibela isithuthuthu ukhuphuke noma wehle izitebhisi noma weqe izithiyo 8: Ukugijima kubangela ukuthi ihabhu lesondo libangele ukushisa okuphezulu, sicela ungathinti u-9: Ungagibeli isikuta sikagesi ngaphandle enkungwini esindayo noma kwesinye isimo sezulu esibi njenge izivunguvungu neziphepho zesihlabathi 10: Sicela nigqoke isigqoko sokuzivikela kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngesikhathi sokugibela, futhi uma kunesidingo, sicela nigqoke nezipikili zamadolo nabavikeli bengalo